Olee otú iji tọghata AMR ka MP3 on Mac OS X (Mavericks gụnyere)
> Resource> Mac> Olee otú iji tọghata AMR ka MP3 on Mac OS X (El Capitan gụnyere)
1. Gịnị bụ AMR?
Gịnị bụ AMR? AMR anọchi agbanwe Multi-Rate audio codec, ọdịyo data mkpakọ maka okwu nzuzo. Ọ bụkwa a faịlụ Ọkpụkpọ maka Ndekọ mmadụ okwu na olu na AMR codec. Ọtụtụ oge a color, karịsịa Ericsson 3G ekwe ntị na-eji AMR format faịlụ ka ịdekọ kwuru ozi. Ma e wezụga ụfọdụ ngwa dị ka Apple QuickTime na RealPlayer, ọtụtụ egwuregwu apụghị ịkọwa na AMR faịlụ. Iji na-egwu AMR faịlụ ọzọ kpamkpam, ọ bụ ezi echiche ntọt ya ndakọrịta site n'ịtụgharị gị AMR ka MP3.
2. Olee otú iji tọghata AMR ka MP3 on Mac OS X
Ọ bụrụ na ị echekwara ụfọdụ audio E ke AMR faịlụ na chọrọ iji tọghata AMR ka MP3 Mac maka wider ojiji, e nwere mfe na-eji ngwá ọrụ gị ịrụ ndị Mac AMR ka MP3 akakabarede. Isiokwu a ebe a na-enye gị na a mara mma AMR ka MP3 Ntụgharị Mac (El Capitan akwado). Ọ nwere ihe abụọ nsụgharị: Intel version na PowerPC version. Dị nnọọ họrọ nri version n'ihi na gị Mac processor. Na-elele processor, ị nwere ike pịa Apple "akara site na isi menu, wee họrọ Banyere nke a Mac" nhọrọ.
Ugbu a, dị nnọọ eso ndu iji tọghata AMR ka MP3 on Mac OS X nzọụkwụ site nzọụkwụ. Usoro dị nnọọ mfe, dị nnọọ ole na ole clicks.
Nzọụkwụ 1: mbubata gị AMR faịlụ ka a AMR ka MP3 Ntụgharị Mac
I nwere abụọ ọzọ ụzọ Ibu Ibu AMR faịlụ ka a AMR ka MP3 Ntụgharị maka Mac.
• Mgbe ị na-ahụ gị AMR faịlụ echekwara na Mac, ị nwere ike ozugbo ịdọrọ na dobe ha ka ha a usoro.
• Gaa Njikwa "> Bubata"> Tinye Audio Files "na-agagharị na kọmputa gị na diski ike ma họrọ AMR faịlụ mbubata.
Nzọụkwụ 2: Họrọ MP3 na mmepụta format window
Pịa abụọ elu-akụ na ala nke a usoro si ebi ndụ, wee họrọ MP3 dị ka mmepụta format na Common Audio "udi.
Cheta na: Mgbe ụfọdụ, ị chọrọ dezie gị mbụ ọdịyo faịlụ. Ka ihe atụ, ị dị nnọọ mkpa ebipụ ụfọdụ achọghị mkpachị, ma ọ bụ jikota abụọ AMR mkpachị ọnụ wdg I nwekwara ike ime ihe ndị a edezi ọrụ na ngwa a.
Nzọụkwụ 3: Malite AMR ka MP3 akakabarede on Mac OS X (El Capitan gụnyere)
Na ala nri akuku nke a na ngwa isi interface, ị nwere ike pịa tọghata bọtịnụ iji malite AMR ka MP3 akakabarede on Mac. Mgbe akakabarede a mere, ị nwere ike nweta MP3 faịlụ na otu dijitalụ audio ọdịnaya. Ọ bụrụ na ị na-ahụ ya bụ ike ahụ mmepụta faịlụ gị Mac, ị nwere ike ịtọ mmepụta nchekwa site onwe gị. Ime ya, dị nnọọ pịa mmepụta na ala ekpe nke usoro ihe omume window ezipụta na mmepụta nchekwa.
Ọhụụ mmetụta: Twixtor maka Mac
Download DVD kpatụ aka gaa na maka Mac Alternative